Aden Barre Ducaale oo ka hadlay afduubka gabdhaha Soomaalida maalmihii la soo dhaafay loogu geysanayay Kenya gaar ahaan islii | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Aden Barre Ducaale oo ka hadlay afduubka gabdhaha Soomaalida maalmihii la soo...
Xildhibaanka laga soo doorto Garisa, Aden Barre Ducaale, oo ka mid ah siyaasiyiinta billaabay in ay la kulmaan laamaha amniga, wuxuu sheegay in ay warka ku hayaan in seddax gabdhood la waayay – Labo reer Islii ah iyo mid degganeyd xaafad lagu magacaabo kayole.
“Bulshada Soomalida ahaan, waxan waa shay nagu cusub. Walaac badan ayuu na geliyay labadii maalmood ee aan soo dhaafnay”, ayuu yiri Aden Ducaale.
Muuqaal argagax leh oo lagu bahiyay baraha bulshada oo ay ka soo muuqatay mid ka mid ah gabdhahaas, waxay sheegtay in kooxda haysata ay doonayaan illaa $50-kun oo dollar oo madax-furasho ah.
Gabadha ka soo muuqatay fiidiyowga waxaa wejigeeda ku yaalla dhaawacyo xun. Da’deedana waxaa lagu sheegay 23 sano, sida uu qoray wargeyska Standard ee Kenya.
Wargeyskaas oo soo xigtay dumaashigeeda oo lagu magacaabay Cumar Ibraahim, wuxuu qoray: “Dadkii afduubtay waxay farriin noo soo qoreen Arbacadii (oo shalay ahayd), waxayna sheegeen in madax-furashada ay doonayaan”.
“Waxaan ka walwaleynaa in ay dhibaato u geystaan”, ayuu hadalka ku sii daray, sida ku xusan Standard.
Previous articleWadamada Khaliijka oo Wadnaha Farta ku haaya.
Next articleMadaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, oo kulan dardaaran iyo duco ah la qaatay 17-ka xubnood ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa
Safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho ayaa ammaantay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo HirShabelle inay kasoo horjeesteen muddo korodhsiga, ayna ku taageerene heshiiskii 17-kii September. Fariin...
Faa’idooyinka naasnuujinta u leedahay ilmaha
Wakiilada Caalamka oo wada kulamadii ay iskaga hor keeni lahaayeen dhinacyada...
Raisal wasaarihii Dowladda Sweden oo la riday kadib markii waayay...
Maxkamadda Ciidamada Puntland, oo magaalada Galkacyo kaga dhawaaqaday xukunka...
Ku dhawaad 16 qof oo uu ku jiro Taliye ku xigeenkii...